ट्रेलरमा चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’ दयाहाङको नायिका प्रियंका कि दिया ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment ट्रेलरमा चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’ दयाहाङको नायिका प्रियंका कि दिया ?
काठमाडौं । चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । चलचित्र माघ १२ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
चर्चित निर्देशक मिलन चाम्सद्धारा निर्देशित यो चलचित्रलाई त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा देखाइएको बुझ्न सकिन्छ । चलचित्रमा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, दिया पुन, संजय गुप्ता लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
चलचित्रको ट्रेलरमा नायक दयाहाङ राई चलचित्रका नायिका प्रियंका कार्की र दिया पुन मध्ये कसका हुन्छन् भन्ने फिल्मनै हर्नेुपर्ने हुन्छ । नेपाल र बेलायतमा खिचिएको चलचित्रको लण्डनमा प्रिमियर समेत भैसकेको छ ।
चलचित्रमा बीपी खनाल, भवानी शर्मा, हिराल जोशी र मिलन चाम्सको लगानी छ । चलचित्रमा विक्की जोशी, जेनिहा लिम्बु, मोनिका, रुपा पुन लगायतको पनि अभिनय छ । सम्राट बस्नेतको एक्सन, ताराप्रकाश लिम्बु र राजनराज सिवाकोटीको यो चलचित्रमा संगीत छ ।
कथाः क्रिसमस किन र कसरी मनाईन्छ ?